Afrika : Bilaogy miteny anglisy miresaka ny sehatry ny aterineto ao Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2018 2:57 GMT
Varavarana haino aman-jery tsy miankina maro izay manangona lahatsoratra mikasika ny teknolojia, fifandraisandavitra, izay mety mahakasika ny fampandrosoana an'i Afrika ny ITNewsAfrica [amin'ny teny anglisy, toy ireo blaogy rehetra natolotra]. Mamokatra fanadihadiana matetika ary manaraka ireo hetsika fototra momba ny teknolojia vaovao isanandro ihany koa ilay blaogy. Ny fiantohana matetika ireo hetsika lehibe indrindra momba ny vaovaon'ny teknolojia mandritra ny tontolo andro. Avoakan'ny ekipa mpanonta ao aminy sy ireo tranonkala mpiaramiombon'antoka aminy ny vaovao ao amin'ny ITNewsAfrica.
Mitoraka blaogy ao amin'ny White African i Erik Hersman. Mpandrafitra tranonkala aterineto, mpiara-namorona ny Ushahidi.com, fitaovana iray fanarahana ny krizy izay nampiasaina nandritra ireo korontana tao Kenya taorian'ny fifidianana, mpandray anjara tsy tapaka ao amin'ny AfricanGadget.com ihany koa izy. Tsindraindray, afaka mahita vaovao momba ireo orinasa vaovao sy ny fiainan'ny orinasa sasany ao amin'ny blaoginy ,WhiteAfrica.com, ianareo.
Blaogy ogandey izay voalaza ho toy «ny paradisa ho an'ny mpandrafitra tranonkala aterineto / afrikana mpandraharaha.» ny Appfrica. Miresaka lohahevitra maro mifandray amin'ny sehatry ny teknolojia vaovao ao Afrika, mizara tafatafa niarahana tamin'ireo afrikana lehiben'orinasa ary manaraka ny fironana ao amin'ny sehatry ny finday sy ny aterineto. Jonathan Gosier, izay mpanoratra rindrambaiko, mpanoratra ary mpandraharaha sosialy miorina ao Kampala ao Oganda, no mpamorona ny Appfrica. Mpamorona ny Afridex ihany koa i Jonathan, mpanangona vaovao momba ireo raharaha sy tahirin-kevitra fototra momba ireo orinasa afrikana vao mitsiry, orinasa efa mipetraka ary ireo vondrona vahiny miasa eo amin'ny tanibe.
Blaogy vaovao maniry ny hanaraka sy hanadihady ny famoronan'ireo tanora vao misandratra, ny vaovao momba ny teknolojia sy ireo fampiharana ao Côte d'ivoire, toy ny teknolojia sy ny vokatra ho an'ny finday ao amin'ny firenena ny Startup Ivoire. Kanefa, mbola vao avy noforonina mihitsy ilay blaogy, tamin'ny janoary 2009, ary mbola tsy namoaka na inona na inona.
Manaraka ary maneho hevitra momba ny Tranonkala 2.0 miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'i Afrika ny Tech Masai. Milaza ny pejy ”Momba anay” ao amin'ny Tech Masai hoe : «ny manoratra mikasika ireo orinasa vaovao rehetra hitanay fa mampientam-po sy mahaliana no iraka tontosainay sy mibahana ao an-tsainay. Tanjonay ihany koa ny hameno ny banga navelan'ireo haino aman-jery lehibe tao amin'ny Tranonkala 2.0 afrikana, izay tsy mahazo ny fiheverana mendrika azy, araka ny fiheveranay. » . i Munashe Gumbonzvanda, blaogera sy afrikana mpandraharaha monina ao Kanada no mamoaka ny blaogy Tech Masai.
Manoratra blaogy ao amin'ny Timbuktu Chronicles ary manao ny tantara isanandro, izay mikatsaka ny « handrisika ny resaka momba ny famoronana orinasa, teknolojia sy ny fomba siantifika, ary ny fiantraikan'ireny ao Afrika» i Emeka Okafor, lehiben'ny TED Afrika. Manaraka tetikasa sy hetsika fisantarana isan-karazany mifandray amin'ny teknolojia ao Afrika ny Timbuktu Chronicles.
Blaogy afrikana tatsimo izay mandrakotra ny tontolon'ny start-ups ao Afrika Atsimo sy any amin'ny faritra hafa manerana ny tany ny BandwidhtBlog. Charl Normand, blaogera afrikana tatsimo, no mamoaka ilay blaogy.
Tetikasanà vondrom-piarahamonina natao mba handrisika ny famoronana orinasa ao amin'ny sehatry ny teknolojia ao Afrika ny StartUpAfrica. Mandrakotra ireo vahaolana mampandroso ny teknolojia noforonina tao Afrika ary mizara torohay momba ireo fandaharanasa fampandrosoana, ireo mpampiasa vola, fanampiana sy ny fanoroana hevitra ilay blaogy. Ismail Dhorat no mamoaka ny StartUpAfrica.
Blaogy natokana ho an'ireo ‘start-ups’ an'ny tontolon'ny Aterineto, ny teknolojia, ny vokatra finday sy fampiharana ao Nizeria ny StartupsNigeria, izay ny tanjony dia ny hampifandray amin'ireo ao Nizeria ireo blaogy natokana ho an'ny teknolojia manerana izao tontolo izao sy ho an'ny orinasa. Hita ao amin'ilay bilaogy ny torohevitra, zavatra sy hevitra ho an'ireo starts-ups nizeriana sy nizeriana mandraharahan'ny Aterineto. Manana vondrom-piarahamonina an-tambajotra iray, izay manome azy fahafahana hamorona sy hitantana tambajotra ary hiresaka an-tambajotra momba ireo vaovao farany sy fampandrosoana ao amin'ny indostrian'ny Tranonkala 2.0 ao Nizeria ny StartupsNigeria. lIay blaogera nizeriana Loy Okezie, izay sady mpandalina ny haino aman-jery an-tambajotra no sady mpandraharaha sosialy, no mamoaka ny StartupsNigeria.